Lixabiso isichumiso Linear neentshukumo Screening Machine Suppliers kunye Factory | YiZheng
Inkqubo ye- Iscreen Screen neentshukumo isebenzisa umthombo oshukumisayo onamandla oshukuma kwimoto engcangcazelayo, izixhobo ziyashukuma kwiscreen kwaye ziye phambili kumgca othe ngqo.
Yintoni uMatshini oShukumayo oShukumayo wokuHlola?
Inkqubo ye- Iscreen sokuShukuma kwescreen (Iscreen seNgcaciso yeScreen) isebenzisa ukungcangcazela kwemoto yokuhambisa ukungathi ngumthombo wokungcangcazela ukwenza izinto zishukume kwiscreen kwaye ziqhubele phambili kumgca othe tye. Izinto eziphathekayo zingena kwizibuko lokondla lomatshini wokuhlola ngokulinganayo ukusuka kwi-feeder. Ubungakanani obuninzi bokungaphezulu nangaphantsi buveliswa siscreen semaleko kwaye bayakhutshwa kwiindawo ezahlukeneyo.
Umgaqo wokuSebenza woMatshini oShukumayo oShukumayo wokuHlola
Xa iscreen somgama sisebenza, ujikelezo oluhambelanayo lweemotor ezimbini lubangela ukungcangcazela kokungcangcazela ukuba kuvelise amandla okonyusa abuye umva, enyanzela umzimba wescreen ukuba ushukumise isikrini ixesha elide, ukuze umbandela okhoyo onwabile kwaye ngamanye amaxesha uphonsa uluhlu. Ngokwenjenje ugqibe umsebenzi wokujonga izinto. Iscreen sokungcangcazela komgama siqhutywa yimoto eshukuma kabini. Xa ezi motors zimbini zingcangcazelayo zangqamana kwaye ziphinde zijikeleziswe, amandla akhuthazayo aveliswe yibhlokhi ye-eccentric ayarhoxa kwicala elisecaleni, kunye nomkhosi odityanisiweyo odibeneyo kwicala lobude udluliselwa kwiscreen sonke. Phezulu, ke ngoko, indlela yokuhamba komatshini we-sieve ilayini ethe nkqo. Isikhokelo samandla anomdla ane-angle yokuthambeka ngokubhekisele kumphezulu wesikrini. Ngaphantsi kwentshukumo edityanisiweyo yamandla anomdla kunye nokuzicombulula ngokwakho, izinto ziphoswa phezulu kwaye zatsiba ziye phambili ngokuhamba ngomgama kumgangatho wesikrini, ngaloo ndlela kufezekiswa injongo yokujonga kunye nokuhlela izinto.
Izinto eziluncedo ze Linear neentshukumo Screening Machine
1. Ukutywinwa kakuhle nothuli oluncinci kakhulu.
Ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ingxolo ephantsi kunye nobomi benkonzo ende.
3.Ukuchaneka kokujonga okuphezulu, amandla amakhulu okulungisa kunye nesakhiwo esilula.
4. Isakhiwo esivalwe ngokupheleleyo, ukukhutshwa ngokuzenzekelayo, okulungele ngakumbi ukusebenza komgaqo wokuhlangana.
5. Onke amalungu omzimba wesikrini adityaniswe ngeplate yensimbi kunye neprofayili (iibholiti zinxibelelene phakathi kwamanye amaqela). Ubungqingqwa obupheleleyo bulungile, buqinile kwaye bunokuthenjwa.
Umgama oShukumayo woVavanyo loMatshini weVidiyo
Umgama oShukumayo woKhetho loMatshini oKhethiweyo
Egqithileyo Rotary Igubu Sieving Machine
Okulandelayo: Irabha Belt swa Machine
Intshayelelo Uyintoni umatshini wokuPakisha oPhindayo oBini? Umatshini wokuPakisha oPhindayo oBini ngumatshini wokupakisha ozenzekelayo olungele ingqolowa, iimbotyi, isichumisi, imichiza kunye namanye amashishini. Umzekelo, ukupakisha isichumiso segranular, umbona, irayisi, ingqolowa kunye nembewu yegranular, amayeza, njl.
Intshayelelo Yintoni isitovu somoya oshushu? Isitovu somoya oshushu sisebenzisa ipetroli ukutshisa ngokuthe ngqo, senza ukuqhuma okushushu ngonyango lokucoca okuphezulu, kwaye sinxibelelane ngokuthe ngqo nezinto zokufudumeza kunye nokomisa okanye ukubhaka. Sele iyimveliso ebuyiselweyo yomthombo wobushushu wombane kunye nobushushu bendabuko kumthombo wobushushu kumashishini amaninzi. ...
Intshayelelo Yintoni umatshini wokucoca ojikelezayo we-Organic? Isichumisi sokuqala se-organic kunye negranules yechumisi edibeneyo ineendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu obahlukeneyo. Ukwenza iigranules ezichumileyo zibukeke zintle, inkampani yethu iphuhlise umatshini wokucoca isichumiso somanyolo, umatshini wokucoca isichumiso somdibaniso njalo ...
Intshayelelo Umatshini wokuChumisa umatshini weCage oSetyenziselwa ntoni? Umatshini wokuChumisa umatshini weCage Mill ngowomatshini ophakathi ophakathi othe tyaba. Lo matshini uyilelwe ngokomgaqo wokuchaphazela ifuthe. Xa ngaphakathi nangaphandle iikhetshi jikeleza kwicala elichaseneyo ngesantya esiphezulu, umbandela lityunyuzwa f ...